नेपाल आइडल सिजन– २ का विजेता रवि ओडको नयाँ गीत 'पिलाएर नशा' सार्वजनिक गरिएको छ । रविले गाएको यो गीतलाई गायक अर्जुन पौडेलले लेखेका हुन् साथै गीतमा उनकै संगीत रहेको छ । केही समय अघी मात्र रिलिज भएको पौडेलको गीत 'बबाल' ले छोटो समयमै चर्चा कमाइरहेको छ। भिडियोमा चर्चित मोडल अनि नयिका तथा मोडल बर्षा राउत र रन्जित पौडेलले अभिनय गरेका छन् भने भिडियो निर्देशन चर्चित निर्देशक निकेश खड्का ले गरेका हुन ।
मिस गुरुङ इन्टरनेशनल सिजन ३ को उपाधि तनहुँ की बिनु गुरुङले जितेकी छन् । काठमाण्डौ को कमलादी स्थित प्रज्ञाभवनमा देशभरि वाट छानिएका १५ प्रतिस्पर्धी बिच सम्पन्न भएको मिस गुरुङ इन्टरनेशनल तेश्रो सस्करण को उपाधि बिनुले जित्न सफल भएकीहुन् । काठमाडौंमा भएको फाइनलमा १४ प्रतिस्पर्धीलाई पछाडी पार्दै बिनुले उपाधि उचालेकी हुन् । त्यस्तै फस्ट रनअरअपको उपाधि ओसिन गुरुङले हात पारिन् भने सेकेन्ड अन्जु गुरुङ भइन् ।
स्वदेशमा सफल प्रदर्शन हिरो नं. १
कुमार पौडेलको ‘यो दुनिँया’
गाएक कुमार पौड्यालको आधुनिक गीत ‘यो दुनिँया’ डिजिटल बजारमा आएको छ । बुढेशकालमा आउने शारिरिक समस्या पछि परिवारमा भोग्नु परेको पिडा समेटिएको गीतमा स्वर कुमार पौडेल, शब्द तथा लय कृष्ण गोपाल तामाङ, एरेन्ज कमल सौरागको रहेको छ । गाएक पौडेलले एक दर्जन भन्दा बढि आधुनिक तथा लोक गीतमा स्वर दिईसकेका छन् ।
एक्सनले भरिपुर्ण चलचित्र 'शिबम्'
निर्देशक राजु गिरीले निर्देशन गरेको चलचित्र 'शिबम्' प्रदर्शनको लागी तयार भएको छ । चलचित्र सेन्सर बोर्डबाट सेन्सर पास गरी पिजी सर्टिफिकेट लिएसँगै यो चलचित्र प्रदर्शनको लागी तयार भएको हो । एस.के. प्रोडक्सन एण्ड मिडिया प्रा.लि.को ब्यानरमा निर्माण भएको यस चलचित्रमा सोहम भेटुवाल, शुभेच्छा थापा, रबि गिरी, प्रदिप गिरी, रश्मी भट्ट, पल्पसा डंगोल, राजकुमार थापा, राजु गिरी लगायतले अभिनय गरेका छन् ।
‘नेपाली लोक संस्कृति भनेको हाम्रो मुटु हो’
नेपाली लोक गीतसङ्गीतमा लाग्नेहरूको अहिले बाढी नै चलेको छ । कोही एकैछिन् भर्खे भेलजस्तै गरी आएर हराएका छन् भने कोही यस क्षेत्रमा संघर्ष गरेर नेपाली लोकगीत सङ्गीतको संरक्षणको लागि खटिरहेका छन् । साँच्चै नेपाली लोक गीत, दोहोरी गीतलाई आफ्नो मन मुटु सम्झने हो भने उसले आफ्नो संस्कार, संस्कृतिलाई कहिल्यै पनि भुल्न सक्दैन । तर यहाँ त एकैछिन् लाग्ने अनि पानीको फोकाजस्तै गरेर बिलाउनेहरूको भीड पनि कम छैन । यस क्षेत्रमा निरन्तर लाग्नेहरूको अभाव खड्किएको भने अवश्य नै हो । केही कलाकार मात्र यस क्षेत्रमा लागिपरेका छन् ।
सङ्गीतमा संघर्ष गर्दै चिरञ्जीवी कार्की
नेपाली गीतसङ्गीतमा पछिल्लो समयमो सङ्गीत पारखीहरूको संख्या बढिरहेको छ । कोही रहरले यस क्षेत्रमा आएका छन् त कोही यसैलाई आफ्नो पेशा बनाएर लागि परिरहेका छन् । त्यसैको भीडमा आएका एउटा पछिल्लो सङ्गीत पारखी कलाकारको नाम हो चिरञ्जीवी कार्की । गुल्मी जिल्लाको गुल्मी दरबार गाउँपालिका वडा नं.४ मा
प्रतिष्ठान जापान शाखाको दोस्रो अधिवेशन सम्पन्न
राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान जापान शाखाको दोस्रो अधिवेशन हालै सम्पन्न भएको छ । यही मंसिरमा हुने प्रतिष्ठानको केन्द्रीय अधिवेशनको तयारीको लागि जापान शाखाको सो अधिवेशन सम्पनन भएको हो । प्रतिष्ठानका केन्द्रीय अधयक्ष बद्री पँगेनीको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पनन सो अधिवेशनमा विशेष अतिथिका रूपमा
‘मेरै बा’बोलको गीत सार्बजनिक
बुबालाई समर्पित गर्दै ‘मेरै बा’बोलको गीत सार्बजनिक भएको छ । गायक तथा संगीतकार पुरुषोत्तम सुबेदीको गीतमा आम्बिका गुरुङको शब्द रहेको छ । निशान कश्यपको निर्देशनमा बनेको भिडियोमा सरोज खनाल,महेश खड्का र समृद्धि पौडेलको अभिनय रहेको छ । बुद्ध थापाले छायांकन गरेको गीतको भिडियो बिकाश दाहालले सम्पादन गरेका हुन्। हरेक बाबा प्रति समर्पित यो गीतलाइ गीत को भावना अनुसार भिडियोमा उतार्न प्रयास गरेको निर्देशक निशान बताउछन ।